Mas'uul lagu eedeeyey in uu canshuur la fakadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bertil Villard .: SR Foton: Scanpix
Mas'uul lagu eedeeyey in uu canshuur la fakadey
Publicerat torsdag 12 maj 2011 kl 12.10
Agaasimaha guud ee hey'adda dhaqaalaha hawlgabka ee AMF Bertil Villard ayey hey'adda canshuuruhu ku soo oogtey in uu dalkaan Iswiidhan canshuur kala fakadey.
Arrintaan ayaa salka ku heeysa xiriiro ganacsi oo si gaar loo leeyahay kuwaas oo ay shirkad Villard si gaar ah u leeyahay, ka macaashtey lacag dhan ilaa 23 milyan oo karoon ,waxayna shirkaddu ka faa'iideeysatey heshiis canshuureed oo horey u dhexmarey dalalka Iswiidhan iyo dalka Peru kaas oo dhigayey in boqolkiiba afar oo kaliya la canshuuro ,lacagihii dib loogu soo celiyo dalkaan Iswiidhan.
Heshiiskaas canshuureed ayaa sanadkii 1960-kii wuxuu dhexmarey dalalka Iswiidhan iyo dalka Peru.
Heshiiskaas ayaa la baabi'iyey sanadku markuu ahaa 2007-dii , laakiin Bertil Villard ,wuxuu sanad ka hor xilligaas shirkad ka furtey dalka Peru taas oo uu lacago faa'iido ah oo dhan 23 milyan oo karoon ,balse aan la canshuurin sii marsiiyey dalka Luxemborg, si uu ugu dusiyo shirkaddiisa ku taal dalka Peru.
Bertil Villard oo ah agaasimaha guud ee heey'adda dhaqaalaha hawlgabka ee AMF , ayaa isaguna dhankiisa ku andacoodey in uu sharciga iyo heshiiskaasba raacey , aysana jirin wax sidaas loo buunbuuniyo oo la xiriira in shirkaddiisu isku dey'dey in ay hoos u dhigto canshuuraha ay bixiso: